IZBAN Tepekoy Izmir Saldhigyada Baska iyo Khariidadda | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYTurkish Aegean35 IzmirIZBAN Tepekoy Izmir Saldhigyada Baska iyo Khariidadda
10 / 12 / 2019 35 Izmir, Tareenka Tareenka, tareenka, Turkish Aegean, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, Headline, TURKEY
İZBAN Tepeköy İzmir Safarka Saacadaha: İZBAN waa mid ka mid ah nidaamyada gaadiidka dadweynaha ee tareenka ugu weyn ee ku yaal dalka Turkiga oo xiriir la leh garoonka diyaaradaha ee ka shaqeeya khadka tareenka ee u dhexeeya Aliağa Selçuk. Tirada saldhigyada gawaarida gaadiidleyda degdegga ah, oo tobannaan kun oo booqdeyaal ah maalin walba, waxay ku kordheen 32 oo leh furitaanka Hilal, iyo 38 oo leh furitaanka khadka Torbalı. Mar dambe, oo ay weheliso khadadka la furay, 41, oo leh tirada saldhigyada, İZBAN, İzmir2 waa nidaamka tareenka ee qaadaya culeyska weyn marka loo eego gaadiidka dadweynaha. Khadku wuxuu ku shaqeeyaa isaga oo kaashanaya TCDD iyo Dawlada Hoose ee Magaalada metela ee Izmir 136 kiiloomitir dheer.
136 kilomitir Dhammaantood waxay curyaamiyeen marinka khadka 'İZBAN' 41 saldhigga. Woqooyi ilaa koonfurta siday u kala horreeyaan:
Madaarka Adnan Menderes,
saldhigyada. Alaybey, Karşıyaka, Saldhigyada Nergiz iyo Şirinyer waa dhulka hoostiisa, saldhigyo kale ayaa ka sarreeya dhulka.
AtionsZBAN Xarumaha Wareejinta
Laga soo bilaabo Halkapınar iyo Hilal ilaa tareenka dhulka hoostiisa ee İzmir; Basaska waxaa laga wareejin karaa Alsancak, Bicerova, Cumaovasi, Cigli, Egekent, Esbas, Halkapinar, Hatundere, Kemer, Mavisehir, Menemen, Salhane, Sarnic, Garage Degmada, Sirinyer, Turan iyo Ulukent station. Gegada Adnan Menderes waxaa laga heli karaa saldhiga isla magaca ilaa koonfurta khadka. Alaybey, Alsancak, Halkapınar iyo Mavişehir waxaa lagu wareejin karaa khadadka taraamka.
İZBAN Safarada Saacadaha 2019
Waqtiga safarka: 05: 20
Waqtiga Imaatinka Saldhigga Ugu Dambeeya: 01: 23
Waqtigee ayuu İZBAN furan yahay?
İZBAN, oo ku shaqeeya khadka tareenka ee u dhexeeya Aliağa iyo Selçuk, wuxuu furmayaa 05.20 maalmaha shaqada. Mararka qaarkood saacaduhu way kala duwanaan karaan inta lagu jiro ciidaha guud.
Waqtigee İZBAN xirmayaa?
IZBAN, oo ka shaqeeya khadka tareenka ee u dhexeeya Aliaga iyo Selcuk, wuxuu xirmaa 01.23 inta lagu jiro usbuuca dhammaadka. Mararka qaarkood saacaduhu way kala duwanaan karaan inta lagu jiro ciidaha guud.
Xarunta 136 waxay ku taalaa wadada İZBAN, oo ka shaqeysa khadka xNUMX kilomitir ee xadka u dhexeeya Aliağa iyo Selçuk. Xadka waqooyiga ee udhaxeeya Aliağa iyo Menemen waxaa loo yaqaan xudunta udhexeysa Menemen iyo Cumaovası iyo xadka koonfureed ee udhexeeya Cumaovası iyo Tepeköy iyo Selçuk.
Ku saabsan İzmir İZBAN
İZBAN waa mid ka mid ah nidaamyada gaadiidka dadweynaha ugu waaweyn ee tareennada ee Turkiga ku leh xiriir la leh gegada diyaaradaha, kuna adeega khadka tareenka ee u dhexeeya Aliağa iyo Selçuk.
IZBAN, oo safarkooda ka bilaabay hawlgal horudhac ah 30 bishii Agoosto 2010, ayaa waxaa lagu aasaasay iskaashiga TCDD iyo 50 ee Degmooyinka Magaalada Izmir. Shirkadda waxaa loo tixgeliyey inay mudan tahay İşbirliği Iskaashatada ugu Wanaagsan ”ee qaybta 3 ee ay soo saartay Ururka Caalamiga ah ee Gaadiidka Dadweynaha (UITP) awooddeeda si ay u gaarto 225 kun oo rakaab ah iyada oo hal-abuurnimada loo abuuray khad ay xareyso 2013 kun oo rakaab ah maalin kasta.
Tirada saldhigyada İZBAN, oo ka bilaabay hawlgalka xarunta 31, ayaa markii ugu horreysay ku kordhay 32 iyadoo la furay furitaanka Hilaal ka dibna 38 oo leh furitaanka khadka Torbalı. Soo bandhigiddii xarumaha caafimaadka iyo xarumaha Selçuk, tirada saldhigyada ayaa ku kordhay 40. Hilal waa barta labaad ee isgoysyada ee İzmir Metro iyo İZBAN kadib Halkapınar waxayna si fiican ugu fududaatay rakaabka ka imanaya jihada koonfur ilaa Konak Metro adoo u wareegaya İzmir Metro. Iyada oo la furayo saldhigyada Develi, Tekeli, Beet, Kuşçuburun, Torbalı, Tepeköy, Sağlık iyo Selçuk, saldhigyada raacaya Cumaovası, kiiloomitir 550 ayaa la helay.
Qadka 'İZBAN', oo kusii fidi doona magaalada Bergama ee waqooyiga, wuxuu gaari doonaa xNUMX kiiloomitir markii mashruucu dhamaado.
Khariidadda Shabakada Nidaamyada Tareenka ee Shabellada İzmir - İZBAN Map
SystemZBAN Nidaam hoosaadka, İZBAN Map iyo İZBAN Stations
2019 İZBAN Safarada Saacadaha Waa maxay İZBAN Waqtiga Furan? Waqtigee ayuu xirmayaa?
Jadwalka Jadwalka Adana Metro iyo Jadwalka
Lakes Express Goobaha Dalxiis iyo Khariidad
Jadwalka Jadwalka Maarso ee Magaalada Seoul iyo Saldhigyo
Khariidadaha Joogtada ah iyo Jadwalka Ankaray
Waqtiga Xarummaha Saldhigga Ankara iyo Khariidadda
LineZBAN Qadka nidaamka tareenka Aliağa-Menderes wuxuu ku yaal Torbalı - Tepeköy.
IZBAN Torbalı iyo Tepekoy ayaa lagu soo bandhigay qandaraasyada qandaraaska
LineZBAN Qadka nidaamka tareenka Aliağa-Menderes wuxuu ku yaalaa inta u dhaxeysa Tepeköy iyo Selçuk…
Waqtigee buu xirmay IZBAN?
IZBAN Waqtiyada duulimaadka
Khariidadda Shabakada Nidaamyada Nidaamyada Tareenka Izmir
Jaamacadda Cige waxay shaqaaleysiin doontaa shaqaalihii hore ee dambiileyaasha
Maanta Taariikhda: 11 Diseembar 1921 Kazim Karabekir